फुटबलले बिथोल्छ निन्द्रा, हृदयघातको खतरा ! – पढेर शेयर गरौ::kamananews
फुटबलले बिथोल्छ निन्द्रा, हृदयघातको खतरा ! – पढेर शेयर गरौ
करिब एक महिनासम्म हुने विश्वकप फुटबलले हाम्रो दैनिकी भने पुरै प्रभावित बनाउनेछ । किनभने विश्वकपको तालिका अनुसार कुनै खेल मध्यरातदेखि सुरु हुनेछ भने, कुनै साँझदेखि । कतिपय छुटाउनै नसक्ने मुलुकका खेलहरु मध्यरातमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वकप फुटवलले जुन किसिमको उल्लास ल्याएको छ, त्यो आफैमा सकारात्मक हो । तर, फुटवलको यो तालिकासँग तालमेल मिलाउँदा हाम्रो दैनिकी भने लथालिंग हुनसक्छ ।
रातभर जाग्राम बसेर फुटबल हेरेपछि अर्को दिन हामी सामान्य लयमा र्फकन सक्दैनौ । उठाई अबेर हुन्छ, खाने तालिका नियमित हुँदैन । यसले हाम्रो दैनिक कामधन्दामा त वाधा पुर्‍याउँछ नै, त्यो भन्दा बढी स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ ।